Qormo Qiima Badan Oo Si Aqoonaysan Loo Qoray Siwayna Aan Uhubo Inay Aad Kuugu Soojiidan Doonto
Saturday November 03, 2018 - 23:12:40 in Maqaallo by Wariye Mohamed BK
Jawigu aad ayuu u deganyahay, waxa dhacaysa noocaw naftu jeclaysanayso.
Hada ayaa saacadii isku taagtay 12:00 habeenimo oo gaw ah. Sanadkuna wuxu isu bedelay 01.01.2000 gebi ahaanba waxa hal minit ka hor aduunka macasalaameeyey qarni waayo badan iyo xusuuso kala duwan ku sagootiyey caalamka.
Waxana albaabada loo furay curashada qarniga 21aad oo ah qarni aduun weynuhu u asteeyey qarnigii technology-yada, horumarka dhaqaalaha iyo cilmiga.
Guud ahaan dadyowga ku nool aduunku waxay qarnigan ku qaabileen yididiilo wanaagsan. Qofkasta waxa qalbigiisa kusii sawiran muuqaalada qarnigii 20aad ee dhowr minit uun ka hor galbaday.
Guud ahaan aduunka waxa si weyn looga dareemaya curashada qarnigan cusub waxana hada khudbadiisii ugu horaysay qarniga 21aad jeedinaya madaxweynaha maraykanka Gorge W. Bush oo si toosa uga baxaya Aljazeera, wuxu Hambalyo u dirayaa guud ahaan dadyowga aduunka gaar ahaan dadka reer America, wuxu carrabka ku adkaynayaa siday lagama maarmaan u tahay in qofkasta oo ku nool aduunku dhexda u xidho horumarka technology-yada, dhaqaalaha iyo cilmiga si loo helo aduun u saamaxa qofkasta doonistiisa.
Daqiiqado yar ka dib waxa masraxa aljazeera kasoo muuqday Madaxweynaha wadanka ruushka Veldamin putin oo hogaamiya dal taariikh badan ku lahaa dhacdooyinka qarnigii galbaday. Madaxweyne putin wuxu sidoo kale Hambalyo u dirayaa dadweynaha aduunka gaar ahaan reer raashiya, wuxu ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay aduunka u leedahay in loo midoobo iskaashiga iyo horumarka qarnigan 21aad.
Sidoo kale waxa khudbado jeediyey madax badan oo wadamada reer galbeed hogaamiya ilaa hada maan arag mid ka mida hogaamiyayaasha qaarada africa oo ka hadlaya bilowga qarnigan cusub.!!
Magaalada aan ku noolahay waqtigan kala wareega qarniyada dad tiro yar baa soo jeeda, laydhadhkii inta badan waa la damiyey marka laga reebo dhowr laambadood oo ka iftiimiya wadooyinka qaar. Magaaladaydan cidina kalama socoto isbedelkan taariikhiga ah ee saamayn doono dhamaan nolosha dadyowga caalamka, kuma baraarugsana xawliga ay ku dhaqaaqi doonto technology-yada, dhaqaalaha iyo cilmigu. Afar melood hadii loo qaybiyo bulshadayda inta wax akhridaa waxay ka yartahay hal meel oo afar jeer la qaybiyey qayb ka mida..!
Suuqa waxad moodaa in laga guuray balse ishaydu hada waxay haysaa dhowr nin oo is daba socda oo aan midkoodna ka kale la hadlayn waxanan u malaynayaa inay qaad kasoo kaceen.
Heerka technology-yada ee guud ahaan dalka aan ku noolahay waa mid ka mida kuwa dunida ugu hooseeya, isgaadhsiinta ugu casrisanina waa telephone ☎️ line-ka. Oo laga isticmaalo magaalooyinka waaweyn uun.
Balse dalka badankiisa waxa lagu wada xidhiidhaa taar, oo aniga laftayda ayaaba galabta kula hadlay adeerkay oo adhigii uu xanuunka caalku kaga dhacay si aan u waydiiyo in dawo aan u dhiibay gaadhay iyo inkale.
Hogaamiyayaasha aduunka badankoodu waxay u balansan yihiin inay qalinka ku doogaan qorshaha horumarka caalamka (MDGs) ee 15ka sanee soo socda 2000-2015, si kor loogu qaado adeegyada aas-aasiga u ah nolosha bini'adamka nasiib darose dalkaygu kama qayb galayo oo lamaba socdo waxa laga hadlayo.
Saamaynta ugu weyn ee qarnigani bulshadayda ku qaabilay waa jahli, dhaqaale xumo iyo mooganaan.
Si kastaba ha ahaatee waxan rajo wanaagsan iyo yididiilo ka qabaa inuu si uun u saamayn doono noloshayada wanaag iyo wacnaana uu nagu qaabilo.
l Eng Mursal Ardale